Goormaa wadanku yeeshay lixda Dowlad Goboleed
Goormaa wadanku yeeshay lixda Dawlad Goboleed?
Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay muddu aan fogayn inay wada tashi ay isugu yimaadaan Dawlad Dhexe iyo Dawlad Goboleedyadu 28/10/2017 si looga wada hadlo arrimo loo arko inay xasaasi yihiin oo wada tashi u baahan. Sida la ogsoon yahay Dawlada Dhexe raali kama ahayn qabsoomida shirkii wada-tashiga ee Dawlad Goboleedyada eek a dhacay Kismaayo, Magaalamadaxda Jubbaland, in kasta oo wadatashigoodu ahaa mid distuurka Soomaaliyeed u ogol yahay. Shirkaas ayaana sida la sheegay sabab u ahaa in madaxweynuhu codsado wadatashiga.
Sida soo baxday madaxweynuhu wuxuu ku amray labada gole ee Baarlamaanka in aanay ka qaybgelin shirkaas. Amarkaasi wuxuu meel ka dhac ku ahaa jiritaanka iyo awooda labada aqal wadankuna waxaad moodaa inuu usii xuubsiibanayo nadaam keligii talis ah (Dictatorial System) halkii uu ka noqon lahaa Nadaam Baarlamaani ah (Parliamentarian System) kaas oo Baarlamaanku awooda sarre leeyahay.
Waxaabase arrintu ka sii dartay markii shirkii la isugu yimid 29kii bisha oo madaxweynuhu soo fariisiyey shirkii lagu casumay Madaxweynayaasha Dawlad Goboleedyada Gudoomiyaha Gobolka Benadir oo ah shakhsi magacaabidiisa uu lahaa madaxweynuhu halka madaxweynayaasha Gobolada ay soo doorteen baarlamaan matalaya Gobola isugu tegey si distuuri ah. Mar labaad taasi waxay meel ka dhac ku ahayd awooda iyo jiritaanka madaxweynayaasha, Baarlamaankooda iyo shicibka soo doorta baarlamaankaas. Waxaana muuqata in madaxweynaha Somalia aad loo cabsiiyey sheekadii Xamar ka socotay oo ahayd Madaxweynayaasha la sheegayaa kama duwana guddoomiyaha Gobolka Banadir. Waxaana muuqata in aanu Madaxweynuhu qadarin distuurka dalka, awooda baarlamaanada ka dhisan Dawlad Goboleedyada (Dawlad Goboleedyadu waxay ka kooban yahay gobollo isutegey kama koobna xaafada isu tegey) iyo isaga madaxweyne ahaan cida uu casumay sida lagu sheegay baaqii madaxweynuhu soo jeediyey ee casumaadu ku soo baxday.
Dhinaca Madaxweynayaasha Goboleedyada masraxa fadhiya ma garanayaan nadaamka iyo sharciyada ay shirka ku fadhiyaan. Mase dhici karta in baarlamaanada ay ka yimaadeen ay dib u eegaan baratoolka khuseeya cidda ay la shiri karaan madaxdoodu dhinaca awooda iyo mataalada iyo wixii uga iman kara madaxweynayaasha haddii arrintaas lagu gafay.